कहाँ छ ३३ किलो सुन, रहस्य किन खुलेन, कसको हो सुन ? « News24 : Premium News Channel
काडमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएको छ । गोरेको बयानमा म भन्दा माथि काम गर्ने अरु नै छन् एसएसपी श्याम खत्रीलाई पक्रनुस् सबै खुल्छ भनेका थिए एसएसपी श्याम खत्रीले पनि आत्मसमर्पण गरि सकेका छन् । खत्रीको बयान पनि सकिएको छ । गोरे भने जस्तै एसएसपी खत्रीले सुन काण्डको रहस्य खुलाए
फरार अभियुक्त एसएसपी खत्रीले गत बिहिबार जिल्ला अदालत, मोरङमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । खत्रीले आत्मसमर्पण गरे लगातै जिल्ला अदालत, मोरङले बयान लिएको थियो । बयानमा खत्रीले गोरेले आफूलाई नटेर्ने र सुन काण्डमा आफ्नो संलग्नता नभएको बयान दिएका छन्।
‘डीआईजीको मान्छे भनेर गोरेले मलाई टेर्दैनथे, उल्टो मलाई हप्काउँथे सुनै भेटिएको छैन, केको तस्कर ?,’ उनले भनेका थिए ,‘एयरपोर्टबाट सुन तस्करी भएको कुरा मलाई थाहा छैन, मेरो संलग्नता पनि छैन मैले कमिसन लिएको कुरा पनि झुटो हो।’ बयानका क्रममा खत्रीले आफू सुन तस्करीमा संलग्न नरहेको, आफ्नै ‘व्याची’ प्रहरीवाट धोका पाएको समेत बताएका थिए ।
तर मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरेले बयानमा आफू भन्दामाथि खत्री रहेको बताएका थिए। गोरेले बयानको प्रारम्भिक चरणमा नै एसएसपी श्याम खत्रीलाई पोलेका थिए। गोरेका अनुसार एसएसपी खत्रीलाई पक्राउ गरे सुन तस्करीको माथिल्लो कनेक्सस खुल्ने बताएका थिए । तर एसएपी खत्री पनि पक्राउ परी बयान सकिएको छ तर पनि अझैँ सुन काण्को रहस्य भने खुल्न सकेको छैन ।
कसले लुट्यो सुन ?
सबैको बयानमा विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकालेर अनामनगरमा रहेको सुन गोदाममा सानु बनले लैजानेक्रममा सुन लुटिएको भनेको उल्लेख छ । सुनका १२ वटा विस्कुट माघ ९ गते यूएईबाट रोहित आचार्य र टेकबहादुर मल्लले नेपाल ल्याएका थिए । जुन साढे ३३ किलोको थियो । विमानस्थलबाट अनामनगरमा रहेको गोरेको अड्डासम्म सुन पुर्‍याउने जिम्मेवारी विमानस्थलका कर्मचारी सानु वनले पाएका थिए ।
वनसहित तक्ले भनिने पुन्यप्रसाद लामाले विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकालेका थिए । तर, अनामनगर आइपुगेपछि मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले उनीहरुबाट सुन लुटेका थिए । सुन लुटिएको थियो या थिएन खुलाएका छैनन् । गोरे समूहका व्यक्तिको दबाव सहन नसकेर वनले विमानस्थल परिसरमै आत्महत्या गरेका थिए ।
मृतक शाक्यकी प्रेमिका भनिएकी निशा सेन ठकुरीको बयानमा रमेश श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ र आकाश लामाले सुन लुट्ने योजना बनाएको खुलाएकी छन् तर रमेश, रोशन र आकाशको भूमिकातिर अनुसन्धान प्रवेश नै गरेको छैन । सुन लुटिएको हो या हैन समेत खुलाउन अनुसन्धान असक्षम छ ।
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याका मुख्य नाइके भनिएका चुँडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले बाहिर आए जस्तो आफू ठुलो सुन तस्कर नभएको बताएका थिए ।
छानबिन समितिसँगको बयानमा गोरेले आफू भन्दा पनि मुख्य मान्छे अरू नै रहेको बताएका थिए । अफुले विमानस्थलमा प्रहरी र एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सुन ल्याउने काम मात्रै गरेको बताएका थिए । गोरेले बयानमा भनेका थिए – ‘मेरा बारेमात्र धेरै कुरा आए। मलाई मुख्य मान्छे भनिएको छ, म नै ठुलो मान्छे होइन, मभन्दा माथि काम गर्ने अरू पनि छन्। उनीहरूको बारेमा पनि खोल्नु पर्छ।’
गोरेले बयानको प्रारम्भिक चरणमा नै एसएसपी श्याम खत्रीलाई पोलेका थिए । गोरेका अनुसार एसएसपी खत्रीलाई पक्राउ गरे सुन तस्करीको माथिल्लो कनेक्सस खुल्ने बताएका थिए ।
सुन कहाँ छ ?
अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा नखुलेको रहस्य चाहिँ गायब भएको साढे ३३ किलो सुन कहाँ छ ? भन्ने हो । कसले लग्यो ? तस्करीकै क्रममा हराएको सुन खोजी, त्यस क्रममा सनम शाक्यको हत्या र त्यसपछि सुरु भएको सरकारी अनुसन्धानले सुन कसले गायब पार्‍यो भन्ने खोतल्न सकेको छैन ।
यति धेरै कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ, यति धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालत ल्याइएको छ तर ३३ किलो सुनचाहिँ कहाँ छ भन्ने सबैको जिज्ञासा रहेको छ ।’ यो प्रकरणसँग शरीर बन्धक र हत्यासम्मका अपराध जोडिए पनि समग्र कारण सुन नै रहेकाले त्यो फेला नपरेसम्म वास्तविकता ओझेलमै रहनेको छ ।
सुन कसको हो ?
तस्करीमा कसको संलग्नता कति हो भन्ने सबै खोतलखातल भए पनि तस्करी भएरको सुन कसको हो खोजतालास भएको छैन । राप्रपाका नेता समेत रहेका भुजुङ गुरुङले बयानमा मोहनकुमार अग्रवालको लगानीमा बैंककबाट थाई एयरलाइन्स हुँदै सुन त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंसम्म ल्याएको उल्लेख छ। सुन कसको थियो भन्ने नाम खुलाउने उनी एक मात्र प्रतिवादी हुन् । सुन कसको हो भनेर अरु कसैले पनि किन खुलाएन ? कि भन्न डराएका हुन ? सुन मालिको बारेमा मुख खोल्दा के हुन्छ ? कतै आफ्नो ज्यानै जाने डरले त साढे ३३ किलो सुनको रहस्य त लुकाएका हैनन् ? यो सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।